KÉRASTASE FRESH AFFAIR DRAMP SHAMPOO 150G
Vidiny ara-dalàna € 21.99
4 sisa tavela!
Lohatenin'ny Default - € 21.99 EUR
Fresh Affair dia shampoo maina iray izay entina mamelombelona ny volo ary mandray menaka avy amin'ny faka.
Ny firafiny miaraka amin'ny vitamina E sy ny starch vary dia mety amin'ny karazana volo rehetra.
Ankoatr'izay, ny fampiasana azy avy hatrany dia mandray menaka be loatra, mamelombelona ny karazam-bolo rehetra, mamela fahatsapana fahadiovana sy fahazavana.
- Fandraisana avy hatrany ny faka sy ny menaka volo.
- Hanitra misy fofona neroli izay maharitra 24 ora.
- Fikasihan'ny hazavana miaraka amin'ny fahatsapana fihavaozana amin'ny volo sy ny hodi-doha.
Fomba ampiharana KÉRASTASE FRESH AFFAIR DRY SHAMPOO 150G:
Ahintsano tsara alohan'ny hampiasana azy. Tazomy ny halavirana 15 sm eo ho eo amin'ny volo. Mitifitra milamina amin'ny volo maina, mifantoka amin'ny faka sy ny hodi-doha. Ampiasao avy eo ilay borosy.
Fangaro mitambatra amin'ny Rice Starch sy Vitamin E: Rice Starch dia mandray ny residuin'ny vokatra sy ny vokatra ary mamela madio sy vaovao ny faka sy volo. Ny otrikaina E. dia otrikaina misy fananana miaro izay misoroka ny volo maina sy ny loha.
Butane, Alkoholika Denat., Propane, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Oryza Sativa Starch / Rice Starch, Diisopropyl Adipate, Disteardimonium Hectorite, Limonene, Linalool, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Butylene Glycol, Helianthus Annutracted Seeded Extracted , Tavoahangin'ny voana tanamasoandro,, Geraniol, Parfum / Hanitra.
* Ny lisitr'ireo fangaro izay mamorona ny firafitry ny marika Kérastase dia havaozina tsy tapaka. Noho izany, mamporisika anao izahay hijery ny lisitry ny akora ao amin'ny fonosana vokatrao mba hahazoana antoka fa azo ampifanarahana amin'ny fampiasana anao manokana ireo fangaro.
IVYBEARS HAIR VITAMINS HAFA ho an'ny VAHINY (60 GUMS) 150G
Vidiny ara-dalàna € 17.60
Vidiny ara-dalàna € 17.99
IVYBEARS HAIR VITAMINS HAFA FOMBA - FIVORIANA 3 VOLANA
Vidiny ara-dalàna € 51.30
KÉRASTASE Genesisy Bain Hydra-Fortifiant 250ml